ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာ (၈) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာ (၈)
Posted by etone on Sep 5, 2011 in Health & Fitness, Parenting & Pregnancy, Short Story | 10 comments
” တံခါးဖျက်မှ ရမယ်ထင်တယ် အစိုးရေ … “
“အင်း ဒါဆိုလည်း မြန်မြန်လုပ်ပါ … အထဲမှာ ဘာများဖြစ်နေလဲ မသိဘူး … “
တံခါးဖျက်လိုက်သော အခါ အထဲတွင် အားမရှိသလို ဖျော့တော့ လဲလျောင်းနေသော မိချိုကို တွေ့ရသည် … နှုတ်ခမ်းများမှာ စွတ်စွတ်ဖြူနေသည် … သတိလည်း ရတစ်ချက် ၊ မရတစ်ချက်နှင့်… ကိုယ်တွေလည်း ခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေတော့သည် … ။
“ဦးဇော်ရေ … ဆေးရုံပို့ရအောင် ကားသွားထုတ်ပါ … မြန်မြန်နော် မြန်မြန် မြန်မြန် … “
မမစိုးနှင့် ဦးဇော်တို့ ချီတွဲကာ ….. မိချိုကို ဆေးရုံပို့သည်… ။ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများက ရောက်ရောက်ချင်း လိုအပ်သည့် ကုသမှူများကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သော်လည်း …. မိချိုတစ်ယောက် ကံကုန်ရှာသည် … ။
” ခွမ်း … “
” ဟဲ့ အကြီးမ စန္ဒာ … ငါ့ကျောင်းက ပန်းအိုးတွေ တော့ ကုန်တော့မှာပဲ … ဘိုးသူတော်က လုပ်လို့ကွဲလိုက် … ညည်းက လုပ်လို့ ကွဲလိုက်နဲ့ …. သေချာလုပ် …သေချာလုပ် …. ” ဟုဆိုကာ … ကျောင်းအတွင်းသို့ ဘုန်းကြီး ပြန်ဝင်သွားသည် … ။
ကျွန်မသေချာကိုင်ထားတဲ့ကြားက လွတ်ကျသွားသော ပန်းအိုးအကွဲလေးကို ကြည့်ကာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည် … ရင်ထဲတွေ အမျိုးမည်မသိသော ဝေဒနာ တစ်ရပ်ခံစားလိုက်ရသည်… ။ ကျွန်မအလွန်ပေ့ါဆလွန်းသည် … ကျွန်မက မိဘအိမ်မှာနေရတာ မဟုတ်ဘူးလေ … ပေါ့တီးပေါ့ဆဖြစ်လို့ ရပါ့မလား … ဆရာတော် မငြိုငြင်အောင်နောက်ဆို သတိထားလုပ်မှပါ… ။
ထိုစဉ် …မောင်လေးနှင့် ညီမလေး … ပြေးလွှားကစားရာမှ ကျွန်မနားရောက်လာသည်… မျက်စိလျှင်သော မောင်လေးက … မမကြီးလက် သွေးတွေ ထွက်နေတယ်ဟု အသံကုန်အော်သဖြင့် … … ဟုတ်ပါရဲ့ …ကျွန်မရဲ့ လက်ပါရှသွားတာပဲ … သွေးတွေလည်း ထွက်နေပါတယ်… ။
မောင်လေးအော်သံကြောင့် ဘုန်းကြီးပါထွက်လာရတော့သည် … ။
” ဟဲ့ စန္ဒာ ဘာဖြစ်သတုန်း … “
“လက်ရှသွာတာပါဘုရား … “
” အေးအေး … ဒါဆိုလည်း … သေချာရေဆေးပြီး ဆေးထည့်ကြားလား … ဘိုးသူတော်ဆီမှာ ဟိုတစ်လောက မြို့က ဒကာတစ်ယောက်လှူလိုက်တဲ့ ဆေးသေတ္တာရှိတယ်… တောင်းပြီး ဆေးထည့်ထား ကြားလား … “
“တင်ပါ့ ဘုရား … “
ဘုန်းဘုန်းက မိန့်ပြီး ပြန်ကြွသွားသည်… ။ ဘုရားပန်းအိုးလဲမှူကို အလျှင်မြန်ပြီးအောင် ဆောင်ရွက်လိုက်ပြီး အနာဆေးထည့်ရန် ဘိုးသူတော်ကို ရှာရတော့သည် … ။ ယခုအချိန်ဆိုဘိုးသူတော်ကြီး အိပ်ချိန်ပဲ .. ကျောင်းအနောက် ကွပ်ပျစ်မှာ ရှိမယ်ထင်တယ်… ကျွန်မသွားရှာကြည့်ဦးမယ် … ။ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ တွေ့ပါပြီ …
“ဦးသူတော် …ဦးသူတော်ကြီး … ထပါဦး ကျွန်မလက်ရှမိသွားလို့ ဆေးသေတ္တာလေး ပေးပါဦး … “
” အာ… ဒီကလေးမှ ရှုပ်လိုက်တာဟာ … သွားသွား ဖုန်သိပ်လိုက် … ဆေးသေတ္တာ ထမရှာအားသေးဘူး … နောက်မှ ဆေးထည့်တော့ ….အလကား လာရှုပ်တယ်… “
ဦးသူတော်ကတော့ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ပြန်အိပ်သွားပါပြီ …သွေးစို့စို့လေးထွက်နေသဖြင့် … သူပြောသလိုပဲ တလင်းမှ ဖုန်မှုန့် အနည်းငယ် သိပ်ထားလိုက်သည် … ထို့နောက် … မီးဖိုထဲမှ လက်နှီးစုတ်လေးကို အပိုင်းလေဖြစ်အာင် ညှပ်ကာ လက်ရှသော နေရာကို စည်းထားလိုက်သည် … ။ ထို့နောက် … မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်သာ ထားလိုက်သည်…
” စန္ဒာရေ .. စန္ဒာ … မြို့က ဧည့်သည်တဲ့ဟေ့… “
” ဟုတ်ကဲ့ ဦးသူတော် ဒီဘက်ကို လွှတ်လိုက်ပါ… ကျွန်မဒီမှာ ရှိပါတယ် … “
” ဟာ အန်တီဝေပါလား … မေမေနေကောင်းရဲ့လား ဟင် … ၀မ်းသာလိုက်တာ အန်တီဝေကိုတွေ့ရတာ … မေမေဘာမှလိုက်သေးလဲ … သမီးတို့က အရမ်းတွေ့ချင်နေတာ … “
“အန်တီဝေ … ဘာလို့ သမီးကိုပဲ စိုက်ကြည့်နေတာလဲ … ဖြေလေ .. မေမေနေကောင်းလား ဘာမှ လိုက်သေးလဲလို့ … “
“သ…သမီး …သမီးရဲ့ မေမေလေ …. ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရာကနေ …ပေါ့ဆမိလို့ … သေရှာပြီ … “
” ဘာ … မဖြစ်နိုင်ဘူး … သမီးမယုံဘူး …အန်တီဝေလျှောက်ပြောနေတာ … မေမေသေချာမှာခဲ့တယ် … ပြန်လာမယ်တဲ့ သမီးတို့အိမ်လေးကို အတူပြန်နေကြမယ်တဲ့ … ” ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ငိုရင်း စန္ဒာတစ်ယောက် သတိလစ်သွားရှာတော့သည် … ။
မျက်လုံးများေ၀၀ါးနေသည် … ကျွန်မ … ကျွန်မ အိပ်မက်မက်တာပါလား …ဟုတ်ပါတယ် ..ကျွန်မ အိပ်မက်မက်တာပါ … ။
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ကုန်းကြုံးထမယ် အလုပ်…
” သမီး … ဖြည်းဖြည်းထလေ … ခေါင်းမူးနေဦးမယ် … “
“ဟင် အန်တီဝေပါလား … ဒါ … ဒါဆို အိပ်မက်မက်နေတာ မဟုတ်ဘူးပေါ့ … သမီးဘာဖြစ်သွားတာလဲဟင် … “
” အိမ်… ဟုတ်တယ် စန္ဒာရဲ့ … ဘုန်းဘုန်းလည်း သတင်းစုံကြားပြီးပါပြီ … သတ္တ၀ါ တစ်ခု ကံတစ်ခုပေါ့ ၊ အတိတ်က အ ကြောင်းတွေ ပါလာခဲ့တာကိုး … လူဆိုတာ သေမျိုးဟဲ့ … တွေ့ဆုံကြုံကွဲ ဓမ္မတ္တာပဲ …. ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ဖြေဟဲ့ … “
ကျွန်မလည်း အိမ်မက်မဟုတ်တဲ့ လက်တွေ့ဘ၀မို့ … ရှိုက်ကြီးတငင် ကျယ်လောင်စွာ အော်ဟစ်ငိုကြွေးလိုက်မိသည် …။ စိုးစိုးဝါးဝါး အော်သံကြောင့် ညီမလေးနှင့် မောင်လေးပါ လန့်ငိုတော့သည်…. ။ ကျွန်မလည်း … ထို့အတူ …အားရအောင် ငိုပြီးမှ … မေမေ့စကားသံတစ်ချို့ ကျွန်မအသိထဲ ပြန်ဝင်လာခဲ့သည် … ။ .. ဟုတ်တယ်… ငါက အကြီးဆုံးပဲ အမေရော .. အဖေပါမရှိတဲ့ အခါ… ငါကပဲ ကလေးတွေ အတွက် ပဲ့ကိုင်ပေးရမဲ့ အဓိကလူပဲ … ။ ၀မ်းနည်းစိတ်များကို ခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တော့သည်… ။
အန်တီဝေ… မေမေ့အလောင်းမြေချပြီးပြီလားဟင် … ။
” အေးပြီးပြီသမီးရဲ့ … ရန်ကုန်မှာက သုံးရက်ပဲ ထားတာများလို့ အန်တီဝေတို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ..ရက်တော့ မလည်သေးဘူး … ။ “
” ဒါဆိုရက်လည်ကို သမီးတို့ ဒီကနေ ဆွမ်းသွပ်အလှူတန်းလုပ် ပေးလိုက်ရအောင်နော် …. နော် အန်တီဝေ … “
” အေးပါ သမီးရယ်…သူ့အလုပ်ရှင်တွေကလည်း စိတ်မကောင်းလို့ သမီးတို့ သုံးဖို့ ငွေနည်းနည်းပို့ပေးလိုက်တယ် … အလုပ်ကဖြင့်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ … သူတို့ အိမ်မှာ ဖြစ်တာဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ အေ …. “
“ရက်လည်လည်း လုပ်ပြီး ပြီဆိုတော့ … ငါလည်း ပြန်ဦးမယ် စန္ဒာရေ … အငယ်နှစ်ယောက်ကို ငါခေါ်ပြီး ညည်းတို့ အဖွားအိမ်ပို့ပေးရလျှင် ကောင်းမလား .. “
” အာ… နေပါစေ အန်တီဝေရယ် … မေမေတောင် ကိုယ့်မာနနဲ့ ကိုယ်မို့ … ကျွန်မကပဲ ကလေးတွေ အတွက် ရှာကျွေးဖို့ အလုပ်လုပ်မှာပါ … လောလောဆယ်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ နေဦးမယ် …. မေမေပြန်လာလျှင် အတူပြန်နေမဲ့ အိမ်လေးကိုလည်း ပြန်မသွားချင်သေးဘူး …အ ရာရာတိုင်း မေ့မေ့အရိပ်တွေပဲမို့ … ဒီမှာနေတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် အန်တီဝေရယ်… ဒါနဲ့ … မေမေဆုံးပြီဆိုတော့ … မေမေအလုပ်လုပ်တဲ့ အိမ်က လူလိုမှာပေါ့ … တခြားလူတော့ မခန့်ပါနဲ့ … သမီးပဲ အောက်ခြေသိမ်း အကုန်လုပ်ပေးပါ့မယ်…. “
အဲလိုတွေ မဆင်မခြင် ဗဟုသုတနည်းလို. ကျနော်တို. ရွာမှာလည်း ကိုယ်သိသလောက်
အသက်ဆုံးတာတွေ ကြားကြားနေရတယ် ရွာဓလေ. တတ်သလောက်လျှောက်လုပ်ကြတာတွေ
တစ်ခါကလည်း အဒေါ်တစ်ယောက် ကလေးမွေးတော. အရပ်ထဲကလက်သည် ကပစ္စည်းမစုံလို.
ကလေးကသေသွားတာ တကယ်ကိုယူကြုံးမရ ကြုံဖူးတယ် မတုံ ရေ
ဇာတ်လမ်းက ဖတ်ရတာ တော်တော်လေး သနားစရာကောင်းလိုက်တာ
ဇာတ်သိမ်း သွားပြီလား etone ရေ …စန္ဒာလေး အကြောင်းကိုရော ဆက်ရေးဦးမှာလား …..
ဇာတ်မသိမ်းသေးဘူးလေ … ကံက ထပ်ဆိုးအုန်းမှာ …
ဇာတ်သိပ်နာလွန်းနေတယ် … ဇာတ်လမ်းဆင်တာကလဲ ရုပ်ရှင်ဆန်နေတယ် … မိချိုကို ချက်ခြင်းကြီး သေပေးလိုက်သလိုဖြစ်နေတယ် …. အဲဒီအိမ်ကလူတွေကို ဗဟုသုတအများကြီးရှိတယ်လို့ ရေးထားပြီး တစ်အိမ်ထဲနေတဲ့ မိချိုကို သေချာဂရုမစိုက်တာကလဲ လွဲနေသလိုပဲ … သမီးအပျိုလေးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာထားတာကလဲ ယုတ္တိမရှိဘူး …
ဇာတ်သိမ်းပြီးမှ ထပ်ပြီးဝေဖန်အုန်းမယ် ….
ဇာတ်က မသိမ်းသေးပါဘူး … ထပ်ဆိုးဦးမှာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ… ဘ၀ဆိုတာ ဆိုးတခါ ကောင်းတလှည့်လာဦးမှာပါ … ။
ဟုတ်ပါတယ် မဝေရေ .. ရုပ်ရှင်ရိုက်မဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုး ဆင်ပြီးရေးခဲ့တာပါ … အဓိကက ပညာပေးဖို့လေ … ။ မိချိုကို ချက်ချင်း ပေးသေလိုက်ရတာကလည်း … နည်းလမ်းမမှန်ပဲ ကိုယ်ဝန်ကို လက်သည်နဲ့ ဖျက်ချလျှင် ဘယ်လို အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ မြင်သာအောင်ပါ … ။ ရှင်ခွင့်ပေးလိုက်လျှင် အသက်ရှင်နိုင်ခြေရှိပါလားဆိုတဲ့ အသိ (ဒီကားသာ တကယ်ရိုက်ဖြစ်လျှင်) ပရိတ်သတ်ကြားထဲ ပျံ့ နှံ့ ကုန်မှာ စိုးလို့ …. အရေးကြီးတဲ့ အခြေနေမျိုး ပြထားပါတယ် …။
အိမ်မှာရှိတဲ့ အိမ်ရှင်မိန်းမကသာ သူ့လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ရှိထားတာ … ကိုယ့်အိမ်ကို အခုမှ ရောက်ခါစမိချိုရဲ့ ကိစ္စအ၀၀ကိုတော့ … ပွဲစား မဝေကပဲ ပဲ့ကိုင်ခဲ့တာပါ .. ။ ဒါကြောင့်လည်း မမစိုးက အကြံပေးလောက်ပဲ ဆွတ်ဖက်ခဲ့ပြီး မိချိုကို မပေါ့နဲ့ ဆေးခန်းသွားဖို့ ပြောခဲ့တာပေါ့ …. ။
1. ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရာမှာ နည်းလမ်းမမှန်တာရယ် … ။
2.သုံးစွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေ သန့်ရှင်းမှုမရှိတာရယ် … ။
3. ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီး အခြေနေကို ပေါ့လျော့မိတာရယ်ကြောင့် … မိချို မသေသင့်ပဲ သေသွားခဲ့တာပါ … ။
4.နည်းလမ်းမမှန် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းရဲ့ … နောက်ဆက်တွဲရလဒ်က သေခြင်းဆိုတာ သိသာစေချင်လို့…. (ကြောက်အောင်) ရေးလိုက်တာ :D
တကယ်တမ်း မိချိုသာ အပ်ထရာဆောင်းရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလျှင် … တစ်ခုခုဆို … ဘာလုပ်ကြမလဲ..သားအိမ်ဆေးမလား ၊ ခြစ်ထုတ်ပစ်မလား တွေးစရာရှိလာပါပြီ … (အဲ့ဒီအချိန် အသက်ရှင်ရန် အခွင့်လမ်း ရှိပါသေးတယ် .. လိုအပ်လို့ သားအိမ်ထုတ်တောင် … သူမသေနိုင်ပါဘူး … ) သူအပ်ထရာဆောင်းမရိုက်မိတာ … အမှားဖြစ်သွားတယ်… ။
ရွာတွေမှာ … အဆွေမျိုး မရှိလျှင် … ဘုန်းကြီးကျောင်းကပဲ အားကိုးရာပါ … ၀ိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား ဆိုနေလို့ရပါပြီ … ။ ထမင်းချက်တဲ့လူတွေ မီးဖိုချောင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေကြပါတယ်တဲ့ … ။ သမီးပျိုလေးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ထားလိုက်တာက မိဘဆွေမျိုး အားကိုး အထောက်ပံ့ မဲ့တာကို ပြလိုက်တာပါ … ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အိမ်ထောင်ပြုစောခြင်းနဲ့ .. သားဆက်ခြားခြင်း ဗဟုသုတနည်းတာတွေရယ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်တာ မြင်သာစေအောင်လေ … ။ ဒါအပြင် စန္ဒာကိုပါ .. တာဝန်ဆိုတာမျိုး(အမွှာနှစ်ယောက်) … ထပ်ထည့်ပေးထားတာ… မိမိတင်မကပဲ.. မိမိရဲ့ မျိုးဆက်ပါ ဒီလို ဒုက္ခရောက်စေတယ်ဆိုတာမျိုးသိအောင်လေ … ။
တကယ့်အဖြစ်ပျက်မဟုတ်ပဲ .. ပ ညာပေးရေးဦးစားပေး ထားတာမို့ .. ဟာကွက်တွေ အများကြီးပါ .. ဟိဟိ … ဝေဖန်တာကို ကြိုဆိုပါတယ် မဝေရေ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ။
ရွာထဲက ဒေါက်တာ မိုးသီတာစိုးကလည်း … ပို့စ်ဆုံးမှ ဝေဖန်မယ်တဲ့လေ … သူကတော့ ဆေးပညာရှူထောင့်ကဆိုတော့ .. ဟာကွက်တွေ ပိုထွက်လာဦးမယ် :D :D
ဟီးဟီး .. ရယ်ချင်တယ်.. တစ်ခါ ကလေး ဖျက်ချထားတဲ့ မိချိုက စန္ဒာကို သိပ်မကြာခင် အောင်မြင်အောင် မွေးနိုင်တာ … ဟာကွက်ပါပဲ … ။ သားပျက် သားလျှော ဖြစ်ထားတဲ့ သားအိမ်က နောက်တစ်ယောက်မွေးလျှင် သားပျက်သားလျှောဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ် … (ကြားဖူးနာဝနဲ့ ဟိုမေးဒီမေး လုပ်ထားရတာ )
တဆက်တည်းမှာပဲ ….. ဘယ်လို အချိန်တွေမှာ ဆက်ဆံလျှင် ကိုယ်ဝန်ရှိလဲဆိုတာ ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူးပေမဲ့ .. သေချာအောင် ဖုန်းဆက်မေးမြန်းတဲ့ အခါ … အသေးစိတ်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ … ရွာထဲက ဒေါက်တာ မိုးသီတာစိုးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်လည်း ပြောချင်ပါတယ် …
အန်တီဝေရယ် သေခြင်းတရားမှာ နှေးတယ်မြန်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူးလေ။ ဩော် မသိနားမလည်သူတွေနဲ့ ပြောရဆိုရတာ တယ်အလုပ်ပျက် အချိန်ကုန်ပါလား…။
အော် ပေါ့တိပေါ့ပျက်နဲ့ နေမိတာကြောင့်။သမီးကတခါမြို့ တက်အလုပ်လုပ်မှာ ဆိုတော့ —အငယ်နှစ်ယောက်ကရော?
စန္ဒာကရော ဒုတိယ မိချိုဖြစ်မှာလား ???
ကျန်ခဲ့တဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ သနားစရာ …
သို့လော သို့လော အတွေးများနဲ့ အပိုင်း ၉ ကိုမျှော်နေပါမယ်။
တုံမမရေ မမှီကတော့ အားလုံးပြီးမှ အစအဆုံးပြန်ဖတ်ပြီး ဝေဖန်ပေးမယ်နော်။ တတ်လို့တော့ ဟုတ်ဖူးနော်။ တုံက ဝေဖန်တာ လိုချင်တယ် ပြောလို့ သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ပြီး ပြောမှာနော်။ အဲ့တော့ကျရင် စိတ်မဆိုးရဘူး။
မမှီရေ .. ဝေဖန်ပါနော် … စိတ်မဆိုးပါဘူး.. ကိုယ်မမြင်တဲ့ဘက်က စာဖတ်သူတွေးတာကို ကြားချင်လွန်းလို့ပါ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် … ။ မနေ့ကလည်း နှစ်ပိုင်းတင်မလို့ မတင်လိုက်ရဘူး … ညနေပိုင်း အလုပ်ပြီးတော့ ကော်နက်ရှင်က ကျနေတာနဲ့ … ။